Idealisme an'ny Rabi Moshe Rat
Responsa > Sokajy: Filozofia > Idealisme an'ny Rabi Moshe Rat
Kobe Nanontaniana 7 volana lasa izay
Te-hanontany aho hoe ahoana ny hevitrao momba ny fomba idealisma tohanan'i Moshe Rat,
Ny fijery izao tontolo izao idealista arosony, dia milaza fa ny zava-misy rehetra dia ara-tsaina, vokatry ny fahatsiarovan-tenan'ny olombelona, ​​izay avy amin'ny fahatsiarovan-tena ambony an'Andriamanitra.
Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny zava-misy dia karazana nofinofy misy ao amin'ny fahatsiarovan-tena manokana, ny zava-misy ihany no nofinofin'ny olombelona rehetra, fa tsy ny anao.
1. Izany dia mifototra, ankoatra ny zavatra hafa, amin'ny fandalinana avy amin'ny quantum (mety ho mifandray amin'ny vokatry ny fandinihana amin'ny fandrefesana, sns.).
2. Ary toy ny mpahay fizika izay manambara fa tsy nahomby avokoa ny fikasana hanorina ny tena fisian'ny zavatra, ary raha izany, ny hany zava-misy dia ny fahatsiarovan-tena. Ara-tsaina.
Ary koa, amin'ny toe-javatra izay mihena ny fiasan'ny atidoha ary kilemaina - ny olona dia miaina traikefa ara-tsaina be lavitra noho ny fanjakana mahazatra.
Ohatra amin'ny tranga niainana saika maty na teo ambany fitarihan'ny zava-mahadomelina sasany. Ary noho izany dia manatona ny toetry ny superconscient tany am-boalohany. ~ / Firaisankina iray. Ary maro hafa.
4. Ambonin'izany, satria maro ny antony mahatonga an'io fomba fiasa io, ary tsotra ihany koa, hoy izy, fa tokony hatokisana.
5. Ary ny fomba fijery izao tontolo izao dia tsy misy dikany. Noho izany, raha tokony hifikitra amin'ny fomba fijery izao tontolo izao tamin'ny Moyen Âge, dia afaka mivoatra amin'ny fandrosoan'ny idealisma.
(Heveriko fa manana hevitra maro hafa izy saingy tsy voapetraka ao anatin'ireo rehetra ireo).
Miainga amin’ireo fomba fiasa ireo dia efa misy ireo manangana karazana modely hanazavana ny zava-misy.
Aoka hatao hoe ny atidoha, araka ny fomba Castrop, dia "ny fomba fijerin'ny fahatsiarovan-tenantsika amin'ny mpandinika ivelany." Ny saina sy ny fahatsiarovan-tena dia tsy zavatra roa samy hafa, fa ny saina dia fanehoana hita maso sy azo tsapain-tanana ny fahatsiarovan-tena.
Tags fanontaniana: be di-, Moshe Rat, Castrop
Mpianatra taloha i Rabi Moshe Rat ary tena mankasitraka azy aho. Tsy mitovy hevitra aminy aho ary indrindra ny fironany amin'ny fantasy sy ny idealisma. Ny hevitra nosoratanao teto tamin'ny anarany (tsy haiko ny pitsopitsony. Tsy mbola namaky aho) dia toa tsy mitombina mihitsy, anisan'izany ny fototry ny siansa.
Ny filazana fa ny zava-misy dia nofinofy izay misy ao amin'ny fahatsiarovan-tena manokana dia toa mifanohitra amiko. Ny fahatsapako manokana Iza? Ny ahy? Ny tiako holazaina dia misy aho? Izaho ihany no misy? Nahoana no mihevitra fa izaho ihany no misy fa ny hafa rehetra tsy misy? Ary ny ambin'ny zava-misy koa tsy izany? Ary misy koa Andriamanitra? Ahoana no ahafantarany?
Ary ny amin'ny fototra "siantifika" dia tsy azoko hoe inona ny fifandraisan'ny quantum. Ny fiantraikan'ny fandrefesana amin'ny zava-misy dia fanontaniana sarotra, saingy mizarazara ny hevitra momba izany, ary mazava ho azy ankehitriny fa ny "fandrefesana" dia tsy mitaky ny fahatsiarovan'ny olombelona (na ny fandrefesana amin'ny ordinatera aza dia manimba ny fiasan'ny onja), mifanohitra amin'izay ekena. amin'ny literatiora malaza. Ary ny mahafinaritra.
Kobe Namaly 7 volana lasa izay
Tsy ao anatin'ny fanambarany rehetra intsony aho, fa izay nolalovako fohifohy momba azy ireo. Manana fitakiana vitsivitsy hafa izy ao amin'ny tranokalany Narrative.
Mazava ho azy fa mihevitra ny olona hafa izy. Saingy tahaka ny amin'ny nofy dia misy olona afaka manonofy tahaka izao eto amin'izao tontolo izao, ny fahatsiarovan-tena dia miara-manonofy ao amin'ny media misaina. Amiko dia misy ohatra iray amin'ny karazana lalao informatika iray afaka mampiseho tsara ny teniny. Mieritreritra ihany koa aho fa fomba fijery metafizika amin'ny zava-misy ary fomba fiasa mirindra.
Fa na izany aza,
Inona no somary sarotra amiko amin'ity lohahevitra ity, araka ny hevitrao, ahoana no tokony hiresahanao an'io lohahevitra io? Sa amin'ny raharaha toy izany?
Ahoana marina no hitondrana fety etsy sy eroa? Ary diniho ny fehin-kevitra ary mandray fanapahan-kevitra.
Rehefa dinihina tokoa, dia mazava ho an'ny rehetra fa araka ny Kant dia tsy misy porofo ny fisian'ny tena universe miaraka amin'ny zavatra ny tenany (Nuumana). Saingy tsy mifanena amin'ny trangan-javatra (afa-tsy ny fisiantsika ihany) isika ... Fa maninona no misy zavatra roa ary tsy mihevitra fa ilay tranga ihany no miasa? (Toy ny karazana hareza Oakham raha eto mihitsy)
Hitako fa ny fanontanianao dia avy amin'ny hantsana malama momba ny fisalasalana ankapobeny dia niakatra, ary angamba ny efi-trano;).
Saingy, tsy mazava ny tokony hiakatra eto satria tsy fomba fisalasalana, fa interpretation metafizika ny zava-misy.
Ny mifanohitra amin'izany angamba no hanontaniako hoe nahoana ny raby no mihevi-tena ho dualisme nefa misy olona hafa ary misy G ‐ d?
Heveriko fa toy izany ny "fijerena" azy. Ary tsy misy antony isalasalana izany ary amin'ny ankapobeny ny fahatakarany sy ny fihetseham-pony no? Saingy ny hevitra momba ny tranga izay manome fanazavana feno momba ireo zavatra ireo dia tsy voatery hisalasala satria toa ny * interpretive * / alternative alternative. Sao dia toa tsy marina ny filazanao izany (satria mifanohitra amin'ny fiheverana fa misy latabatra eo anoloantsika)?
Noheveriko koa fa mety ho Bohrs izay noteneninao tao amin'ny tsanganana 383 no tena sarotra ny mampihatra an'io fandikana io, satria fiteny tsy misy anarana izy io (afa-tsy ny olon-kafa) fa miaraka amin'ny matoanteny sy ny fiteniny ihany. Saingy amin'ny lafiny iray, toa na dia amin'ny lalao ordinatera aza dia raisina ho toy ny misy ny zavatra. Ary raha izany indray dia toa mifanaraka sy mirindra ny marimaritra iraisana.
Ny mpanelanelana farany Namaly 7 volana lasa izay
Noho izany, raha tokony himonomonona izy, dia nitsambikina teo amin’ny tafo avo iray ary nianjera teo amin’ny fahafatesany ary nifoha tamin’ilay nofy. Na izy no hikarakara ny fanafoanana ny hery misintona ao amin'ny nofiny ary hanokatra antsika fiara nofinofy mitsingevana eny amin'ny rivotra.
mikyab Staff	Namaly 7 volana lasa izay
Tsy azonao ireo teny ireo, ary azo antoka fa tsy hainy ny miresaka momba azy ireo (na tsy mahita hevitra amin'ny fanaovana izany).
Miala tsiny amin'ny fahatarana fa sahirana be aho ary te haneho hevitra.
Tsy azoko ny isan'ny teboka amin'ity andalana ity.
1. Voalohany amin'ny tsy fahazoana ny teny.
azon'ny raby ve ilay hevitra hoe satria ny "perception"-tsika ihany no hany fantatsika fa tsy ilay zavatra mihitsy. Noho izany dia azo lazaina fa ny zava-drehetra misy afa-tsy ny olon-kafa, dia ao amin'ny "tsika" ihany. Ary tsy mila manampy amin'ny hypothesis ny fisian'ny zavatra per se. ~ Toy ny nofy. Eto ihany dia nofinofy iombonana.
2. Koa amin'izao fotoana izao dia manana safidy roa isika hanazavana ny zava-misy.
A. Mahita latabatra aho ary misy tokoa ny "material toy izany" ivelany amiko.
B. Mahita latabatra aho, fa raha ny marina dia ao amin'ny fahatsiarovan-tenako ihany izany fa tsy any ivelany. Izy no assimilated ao amin'ny lafin-javatra iray izay mandrindra izany andao atao hoe Gd. Ary mpandrindra mba ho hitan'ny maro koa. Karazana lalao ady miara-miasa amin'ny solosaina.
Raha eny, ahoana no hisafidianana ny fanazavana "marina"?
Rehefa dinihina tokoa, dia ho araka ny etuities sasany izay milaza ho an'ny A. fa misy izao tontolo izao. Ary ho an'i B. hoe tsy mbola nihaona tamin'ity tontolo ity mihitsy isika fa tamin'ny alalan'ny perception foana no nihaonany.
Toa mitombina ny misafidy ny fanazavana tsotra raha manazava ny angon-drakitra mitovy ary raha izany dia mendrika ny misafidy B. Saingy tsy mazava amiko fa marina izany amin'ity tranga ity. Ary amin'ny ankamaroan'ny metodolojika. Saingy eto ny ankamaroan'ny olona dia mihevitra toa an'i A.
Ary raha izany dia manontany aho hoe ahoana no mety sy mitombina ny fifampiresahana momba ity olana ity.
Mifanohitra amin'izany, raha tsy hain'ny raby ny miresaka an'izany, nahoana izy no mihevitra fa i Raby Moshe no diso ary marina izy ??
3. Nahoana no tsy hitanao hoe tsy misy dikany izany resaka izany? Noho ny tsy fahaiza-midinika an'izany ve (ary raha izany, dia ahoana no ahafahan'ny olona miresaka momba ny "fahadisoana" amin'ity fomba ity). Na koa satria tsy misy ny NFKM (fa na izany aza tsy marina dia betsaka ny resaka existentialiste sy filozofia, araka ny filazan'ny mpomba an'io fomba io)
4. Ara-batana, dia azo atao ny mitondra ny karazana porofo rehetra satria ny tena fitaovana fototra dia saha, ary ny fitondran-tena hafahafa (toy ny haingana kokoa noho ny hafainganam-pandehan'ny hazavana, sy ny hafainganam-pandeha tsy manam-petra, fiarovana ny fiampangana izay mampiseho ny lalàna ivelan'ny natiora, sns.). Ary tsy misy amin'ny maha-zava-misy azy ireny fa amin'ny maha "potential" na saha ihany. Saingy misy fiantraikany amin'ny zava-misy izy ireo. Heveriko fa misy ireo mahita an'Andriamanitra amin'izany. Izay mandrafitra ny saha na ny lalàn'ny natiora tsirairay.
Eto ihany dia miroso amin'ny dingana iray fanampiny ao anatin'ny fahatsiarovan-tena iombonana.
Mamelà ny fahatarana fa sarotra ny miady hevitra, indrindra fa mamerimberina ny zavatra nohazavaiko. Hamaly fohifohy aho.
1. Nanazava aho fa tsy azoko ireo teny ireo. Raha tsy misy na inona na inona dia tsy izaho koa. Dia ao amin'ny imagination an'iza ny fisiany? Ny ahy? Ary raha lazainao fa misy aho ka ny hafa rehetra ihany no tsy misy dia inona no azonao? Raha efa mihevitra ianao fa misy ny zavatra iray dia tsy misy antony tsy ahafahanao manampy fa misy koa ny zavatra hafa. Raha ny marina, io no intuition-tsika.
2. Ny fanazavana marina dia izay hitako fa intuitive.
3. Tsy azo resahina tokoa izany. Tsy midika akory izany fa tsy misy ny fahamarinana eto. Tsy marina io idealisma io raha ny hevitro, ary tsy azo resahina. Toy izany koa ny lalàn'ny causality raha ny fahitako azy ary mbola tsy azo atao ny miady hevitra na manaporofo amin'izay tsy manaiky izany.
4. Tsy misy ifandraisany amin'ny fizika. Ny fizika dia tsy milaza hoe tsy misy ny zavatra, fa tsy voatery ho araka ny fiheverantsika azy (tsy marina koa).
Tsy dia mahaliana loatra ireo quibbles ireo ary tsy hitako izay ilana amin'ity resaka ity.
rongony Namaly 7 volana lasa izay
Eny, misaotra Anao.
1. Tsy marina tanteraka izany satria eny dia manaiky fa misy ny olona hafa, ary ny fahadisoana dia ao amin'ny fandraisantsika ny fisian'ny zavatra ivelany izay tsy fahatsiarovan-tena fotsiny.
2. Azoko fa io anarana io ihany no miorina amin'ny fitakiana fanampiny ary raha izany dia manatsara ny fanombohana voalohany. Ho karazana porofo filozofika sy fampiharihariana an'i Gd.
3. Ifanakalozy hevitra raha ny fahaizana manao fanatsoahan-kevitra no tianao holazaina ary manamarina raha misy ny tsy fivadihana sy ny firindrana ao anatin'ny tsy fahalalana? Fa raha eny, ahoana ny hevitrao momba ny filazanao fa tena mahita liana amin'ny kabary ianao. Ary amin'ny dinika ankapobeny…
4. Eny, lohahevitra mahaliana ity izay mipoitra be amin'ny literatiora malaza ary eto amin'ity tranokala ity ihany koa dia mipoitra tsindraindray, ampiasain'ny mpivavaka amin'ny lafiny hafa, ary ny idealista amin'ny lafiny hafa, fa Mila fanitarana i Narali.
1. Araka ny voalazanao fa misy olon-kafa? Ary ny momba azy ireo dia manana fampahalalana mivantana ianao, mifanohitra amin'ny fisian'ny latabatra?
3. Efa nohazavaiko tany amin’ny toerana maro ny atao hoe kabary. Filazana tsy misy azo handinihana ireo, satria izay manamafy azy ireo dia handà ny hevitra rehetra (mety ho illusion-ko ihany io). Noho izany dia tsy hitako izay hiafaran'ity resaka ity.
1. Heveriko fa azo iadian-kevitra amin'ny ankapobeny mifototra amin'ny intuition. Fa raha izany dia lazao fa toy izany ny latabatra tena misy.
Ka mahazo. Mahita zavatra tsara kokoa ve ianao?
2-3. Misaotra. azoko izao.
4. Araka ny nolazaiko momba ny fifandraisana misy eo amin'ny siansa maoderina sy ny siansa sy ny filozofia sy ny teolojia, dia tiako ny hanontany, fa aleoko midina kely aloha. Satria tena fahita amin'ny literatiora sy ny literatiora malaza. Na dia mahagaga aza ny filazanao eto (mety ho asehon'ny fizika maoderina mihitsy aza fa ny zavatra tsikaritra dia tena toy izany tokoa). Raha tsy nesoriko tanteraka ny fikasanao tamin'ny fihodinana angamba 🙂
Amim-pahatsorana dia heveriko fa lohahevitra lehibe ity ho an'ny tsanganana indrindra fa ianao dia dokotera ao.